Shina : Miaraka Fiverenan’ny Fahalinan’i Amerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2011 10:17 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Jery todiky ny Global Voices 9/11.
Manao jery todika [zh] aty amin'ny folo taona taorian'ny-9/11, ilay mpanoratra tantara Sinoa, mpanao famakafakana ara-politika ary mponina tao Etazonia teo aloha, Yang Hengjun, dia nanoratra (tahaka ny hoe tanora nasionalista fahiny) manao hoe : Etazonia nanao an'i Shina tsy ho toy ny fahavalony #1 intsony, ary izaho koa dia tsy manao an'i Etazonia ho izany amiko ; saingy amin'izao fiverenan'i Etazonia izao, aiza ho aiza ny toerana misy azy sy i Shina ?”
Ny ady amin'ny fampihorohoroana dia nampahalemy an'i Etazonia, kanefa io koa no nitarika olona maro be tsy toy ny teo aloha hiaiky fa tsy misy fitaovam-piadiana mahery vaika noho ny demokrasia, fahalalahana sy zon'olombelona, ary ny rafi-pisainana izay mila manimba na miady amin'ny vina toy izany dia efa nilaozana sy efa voalahatra ny tsy hanjary. Amerika sy ireo firenena Tandrefana hafa dia nanan-draharaha an-jato taonany maro taminà fahavalo lehibe lavitra noho i Osama bin Laden na i Saddam Hussein, toy ny Firaisambe Sovietika, kanefa tsy nirehareha tetsy sy teroa izy ireo nilaza fa hoe “naharesy” olona. Ary maninona tokoa moa no tsia? Satria izay no fijery iraisam-pirenena momba ny fahafahana, ny demokrasia ary ny zon'olombelona izay niafara tamin'ny famelezana ny Firaisambe Sovietika sy ny Eraopa Antsinanana; tsy nitifitra na indray mandeha akozy aza ny Amerikana.
Ho an'ireo tsy mbola mino izany dia mila mijery ny vola be sy ny zava-tsoa atobak'i Amerika any Iraka , ary mampitaha izany amin'ny elanelana apetrak'i Amerika amin'ny firenena toa an'i Tonizia, Ejipta ary na i Libya koa aza , ary izany dia tsy afaka ny hanalà ny fipoahan'ny fitakiana revolisionera hisian'ny demokrasia, fahalalahana sy fitondrana tsy miangatra ao amin'ireny firenena ireny.
Tato anatin'ny folo taona, fahavalo lehibe iray hafa no voafehin'i Etazonia, i Shina izay efa eo andalam-pivoarana, ary ankehitriny dia mifanapakana indray mandeha indray ny làlan'ireo firenena roa ireo. Dia inona izao no hitranga? Ny zavatra telo lehibe mibaiko ny fifandraisana Sinoa-Amerikana dia ny toekarena, politika ary ny fandriam-pahalemana. Ny tiana ho lazaina amin'ny hoe fandriam-pahalemana dia ny hoe ny miaramila Amerikana dia mijanona ho isan'ny tsara indrindra manerana izao tontolo izao ary, etsy ankilany ny fisondrotry ny miaramila Sinoa ao Azia, afaka ny hiara-honina ampilaminana ny andaniny sy ny ankilany.
Ny tiana ho lazaina amin'ny hoe politika, raha ho an'i Etazonia manokana, dia miresaka ny lanja sy ny foto-kevitra toy ny hoe fahafahana sy demokrasia ; niaraka tamin'ireny, Amerika dia lasa firenena matanjaka indrindra eran-tany ary tsy misy ny toa azy, hatreto izay rehetra firenena nanandrana nanohitra an'ireny foto-kevitra ireny dia rava. Mbola hanohy io lalao io ihany ve Amerika mandra-pampiasany fitaovam-piadiana mahery vaika, hamafa ireo rafitra tsy ara-demokratika rehetra tsy ho eto amin'izao tany misy antsika izao amin'ny alalan'ny tifitra tokana?
Araky ny fantatro, dia misy olona mbola manana fisainana toy izany ao amin'ny fitondrana ao Etazonia ao. Manana fahefana izy ireo, kanefa ny ho fibahanan-toeran'ny firehan-kevitr'izy ireo na tsia, sy ny hahazoany ny fitantanana dia miankina amin'ny hoe hatraiza ny fahamarinan-toerana ara-toekarena, na koa rehefa misy fifandonana ara-miaramila. Tonga amin'ny famehezako azy tamin'izany andro izany aho manao hoe raha voahaja ny fifandraisana ara-toekarena misy eo amin'ny Shina sy Etazonia, ary ny fitomboan'ny fahamarinan-toeran'ny tanjak'i Shina manerana ny firenena, dia tsy hieritreritra ny handrava an'i Shina mihitsy i Amerika.
Mandritra io fotoana io, raha toa mandalo karazana fotoana tetezamita eo amin'ny fiainany i Shina, tsy hanohana mihitsy Etazonia. Betsaka amin'ireo manampahaizana eto amin'ny tanibe (kaontinanta) no niray hevitra tamiko momba io, nilaza hoe na misy olana aza mianjady amin'i Shina, amin'ny fifanakalozana ara-barotra misy eo amin'ireo firenena roa ireo sy ny hery miaramilan'i Shina, dia tsy misy zavatra azon'ny Etazonia atao firy. Ireo manampahaizana ireo, na izany aza, dia manome lanja be loatra ny faminavinàny ny tombontsoa anaty fotoana maharitra entin'ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'i Etazonia sy Shina. Raha ny tena marina, ny tena voakasika mivantana amin'io fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Etazonia sy Shina io ireo olona hirotsaka ho Kandidà ho filoha.
Izany no antony, talohan'ny fikasàny hilatsaka indray, nandefasan'i Obama an'i Biden hampandry adrisa an'i Shina, amin'ny fanantenana ny hampiasàn'i Shna ny sandam-bolany Renminbi ho fanamarinan-toerana an'i Etazonia. Raha ny momba ny hery ara-tafika indray, zatra ny manao miaramila bokony kamo lahy aho, sa tsy tadidinao ?
Raha hiverina amin'ilay resaka, [Etazonia] dia tsy tokony hisoroka an'i Shina satria eo an-tsampanan-dàlana izy izao. Mba ho ny Taratasy fotsin'ny Fandrosoana am-pilaminana an'i Shina izay vao navoaka, na ireo toky ataon'ireo mpitarika antsika amin'ny firenena maro samy hafa isaky ny mitety tany ry zareo, matetika i Shina no nanao antso avo tamin'ny firaisa-monina iraisam-pirenena hoe manantena ny hanohy ny demaokrasia eo amin'ny fifanakalozany maneran-tany, ka hitovy lenta amin'ireo firenena mpikambana ao, handrisika ny fifanekena sy fifandeferana eo amin'ny roa tonta na eo aza ny tsy fitoviana, hamporisika hatrany ny fahasamihafana, sns. Ny olana, izany, dia : misy ve amin'izao fotoana izao firenena mahatoky an'i Beijing ?
Satria nahoana moa no hanao izany izy ireo? raha toa ka toy izao no itondranao ny resaka soatoavina sy fotokevitra eo anivon'ny fiarahamonina iraisam-pirenena, ianao aloha no mila manomboka mampihatra azy ireny, voalohany. Raha ianao aza tsy mahavita manome ny mponina ao aminao ny demokrasia, fitoviana, fifanekena sy fifanajàna ho an'ny zon'ny tsirairay, ahoana moa no ahafahanao manao izany eo amin'ny sehatra manerantany? Raha te-hivoatra am-pilaminana ianao, mampivoatra ny filaminana sy ny fifandraisana mahafinaritra eo amin'ny firenena isan-karazany, ny olona sasany dia nanao topimaso an'ilay antsoinao hoe “mirindra mahafinaritra”, ahoana no tsy hiahiahiana fa raha vao mahazo fahefana ianao, dia ho tahaka ny fitondranao ireo mponina ao aminao koa no itondrànao azy ireo, ka hanandrana sy hanao izao tontolo izao ho “mirindra mahafinaritra” tahaka ny any amin'ny firenenao?.
Ny fahitako izany, ny olan'ny Shina dia tsy ao anatin'ny raharaha ara-diplomatika, ary tsy ao anatin'ny fifandraisana Sinoa-Amerikana, na ny fiarovana ara-miaramila, fa kosa ao amin'ny raharaha anatiny, eo amin'ny làlana sy ny rafitra izay nofidiantsika, ary na afaka na tsia ny hiantoka ny faneken'ny mponina io lalàm-panorenana sy fahafahana ataon'izy ireo io. Na koa ho afaka hiantoka ny fahafahan'ny mponina hanana ny zony sy ny fahalalahany araka ny lalampanorenana ve sa tsia izy ireny. Na tena mahazo ny zony ara-demaokratika marina tokoa ny vahoaka mba hitondràny ny fireneny araka ny hitany fa mahamety azy.
5 ora izayKanadà